- नेपाली सन्देश मङ्लबार, चैत्र १२, २०७५ , 19.4K जनाले हेर्नुभयो
काठमाडौं । बिकशित देश बेलायतका एक नागरिक काठमाडौँको बिर अस्पतालमा बेबारिसे जस्तै भेटिएका छन । उनि रुदै गरेको खबर अहिले सामाजिक सन्चालमा भाइरल बनिरहेको छ । उनी बीर अस्पतालमा बेवारिसे रुपमा जीवन र मरणको दोसाधमा छन् ।
उपचारमा संलग्न एक चिकित्सकका अनुसार उनलाई हेपाटाइटिस सी र डाइबेटिस रोग छ । त्यसको लागी अस्पताल आफैले खर्च बेहोर्न नसकेको र बेलायती एम्बेसीले पनि बेवास्ता गरेको कारण उनको यो हालत भएको हो । सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा उनको समाचार भाईरल भएपछि स्टार न्युज नेपालका रबिन पौडेल उनलाई भेट्न बीर अस्पताल पुगेर उनीसँग कुरा गरेका थिए ।
बिर अस्पताल पुग्दा देखिएको यो दृश्य हेर्नुहोस ।
केहि दिनयता एक बिदेशी नागरिकको खबरले सामाजिक सन्जालमा तरँग पैदा गरेको छ । नेपालमा बिचल्लीमा परेका ती बिदेशी नागरिक बेलायतका हुन् । उनी बीर अस्पतालमा बेवारिसे रुपमा जीवन र मरणको दोसाधमा छन् ।
सामाजिक सन्जाल फेसबुकमा उनको समाचार भाईरल भएपछि स्टार न्युज नेपालका रबिन पौडेल उनलाई भेट्न बीर अस्पताल पुगेर उनीसँग कुरा गरेका थिए । के भएको हो, यि बेलायती नागरिकलाई ? कस्ले ल्यायो यिनलाई हस्पिटलमा ? के उनलाई बेलायत फर्काउन सकिन्छ ? शिशिर भण्डारीका साथी रबिनले यि कुरा मिडियामा ल्याएपछि अब शिशिर बेलायती नागरिक फिलिपलाई निको पारी बेलायत फर्काउन कस्सिएका छन् । उनले फिलिपलाई बेलायत फर्काउने बाचा गरेका छन् । भिडियो हेर्नुस।